Zvakanakira oats kune hutano hwako | Bezzia
Susana Garcia | | Nutrition, Utano
La oatmeal chikafu chakazara chaizvo iyo yakave inozivikanwa zvikuru mumakore achangopfuura. Izvo zvakakwana kutanga zuva nesimba asi zvakare kuwedzera kumadhizeti kana kutora ne yogati. Icho chibage chakaringana chinotipa mhando dzese dzechikafu kugadzirisa muviri wedu.
Kana iwe uchida kuziva kuti ndezvipi mabhenefiti ekutora oatmeal Nezve hutano hwedu, cherekedza zvese zvatinokuudza. Iwe zvechokwadi uchave fan yechikafu ichi chinotaridzikawo chakakura mumabhureki edu.
1 Hutano makabhohaidhiretsi
2 Fiber mupiro
3 Chengetedza shuga yeropa
4 Yakapetwa nema antioxidants
5 Inochengeta cholesterol isipo
6 Utano hwemapapu
7 Ally yekunaka kwako
Kana iwe uchida kutanga zuva nesimba uye kuti haripere munguva pfupi, saka iwe unofanirwa kuwedzera oatmeal kune ako emangwanani. Zvinoratidzwa kuti ine anononoka-kutora macarhydrate iyo inodzivirira insulin spikes uye inochengetedza muviri wedu nesimba rinogara riripo. Uku kunzwa kwekuguta kunotibatsira kuti tirege kunwa mukati mekudya, izvo zvinoita kuti titore uremu uye tidye zvisina hutano. Saka isu tichaenda kune chinotevera kudya tisina nzara uye pasina iko kunzwa kwekuneta. Zvirinani kutora aya marudzi emakabhohaidhiretsi pane aya anotipa simba rinokurumidza senge mashuga semuenzaniso, sezvo asina kunyatsonaka kuhutano hwedu uye nekugadzira mhedzisiro inoita kuti tiite nzara gare gare.
Kufanana nezvimwe zviyo zvakawanda, oats inotipa fiber. Izvi zvinoita kuti dumbu redu rishande zvirinani uye tinonzwa zvirinani. ndinoziva inodzivirira kuputika mudumbu uye zvakare iri nzira yakanaka yekudzivirira kunzwa kwenzara, sezvo fiber iri kuguta. Inogadzirisa kugaya uye kunwa kwakanaka kwezvinovaka muviri. Kudya kwedu kunofanirwa kuve nechero mupiro wefibre, kunyangwe isingambowedzere, asi oats anogona kubatsira mune izvi, kunyanya kana tiine matambudziko emudumbu uye kupatirwa.
Chengetedza shuga yeropa
Zvinoratidzwa kuti oatmeal chikafu chakanaka kudzora chirwere cheshuga nekuda kwezvikamu zvacho. Chikafu ichi chinokurudzirwa kune avo vanotambura nechirwere ichi kuitira kudzora shuga yeropa.
Yakapetwa nema antioxidants
Oatmeal ine mabhenefiti mazhinji uye imwe yacho ndeyekuti ine yakawanda antioxidants. Aya antioxidants anobatsira muviri wedu kurwisa zvese zviratidzo zvekukwegura kwemaseru. Kubudikidza nechikafu tinokwanisa kudzivirira muviri kubva mukukwegura nemahara radicals kana isu tikadya chikafu chinotipa isu antioxidants.
Inochengeta cholesterol isipo
Chikafu ichi chakanakirawo vanhu vane iyo cholesterol yakakwira uye inoda kuidzora. Ichi chikafu chinochengeta cholesterol pamazinga akanaka saka zvinokurudzirwa sekudya kwezuva nezuva kune vanhu vanowanzove necholesterol yakawanda. Pasina kupokana, iyi mhando yekuwedzera yakakwana kune yedu yakareba-hutano hutano.
Zvinoratidzwa kuti oats vane expectorant uye mucolytic zvivakwa. Izvi zvaizobatsira system yedu kuvandudza kana isu tine chikosoro uye bronchitis matambudziko. Saka oatmeal ine ese marudzi emabasa.
Ally yekunaka kwako
Kunyangwe oatmeal chikafu chakakura kana tikachidya nekuti icho chinotipa mabhenefiti mazhinji ane hutano, iri zvakare ishamwari yakanaka kwazvo iri kuramba ichishandiswa pakurapa nezvizoro. Neoats tinogona kugadzira exfoliating kurapwa kusiya ganda redu richiita senge nyowani, sezvo iinewo simba rekuzvivandudza uye antioxidant. Asi zvakare kuti oatmeal ine pfuma yekuchengetedza ganda redu ne pH yakakwana uye neiyo hydration yainoda, sezvo ichibatsira kuinyorovesa. Kana tikashandisa mask ine oatmeal nemukaka tichava nechakagadzirwa chigadzirwa cheganda rakaoma kana dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Zvese izvo oatmeal zvinogona kuita kune hutano hwako
Maitiro ekurega kuita bonde uye kutanga kuita rudo